Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga Javier Tebas oo shuruud ku xiray Neymar Jr, kahor inta uusan ku laaban Spain – Gool FM
(Spain) 18 Juunyo 2019. Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain Javier Tebas ayaa xaqiijiyay in albaabadu ay u furan yihiin Neymar Jr si uu u soo laabto inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee haatan socda.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Paris Saint-Germain xagaagan si uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona ama xitaa uu ku biiri karo Real Madrid, iyadoo wararka xanta ah sii xoogeysanayaan kaddib hadalada kasoo yeeray madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi.
Hadaba Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas oo ka hadlayay wararka la xiriirinaya Neymar inuu markale dib ugu soo laabanayo Spain ayaa Yiri:
“Waxaan soo dhaweyneynaa in Neymar Jr uu dib ugu laabto horyaalka Spain, lakiin waa hadii uu si fiican u dhaqmayo”.
Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa kala jeeda hadalkiisan ficilada muranka ka taagan uu weeraryahanka reer Brazil sameeyay dhawaanahan, oo ay qeyb ka tahay kiisaska lagu eedeynayo ee ku saabsan inuu sameeyay kufsi.
Saxaafada faransiiska ayaa xaqiijisay in Neymar Jr uu xisaabiyo saacadaha, si uu kaga tago Paris Saint-Germai kaddib laba xili ciyaareed uu la qaatay, xili kooxda PSG ay albaabka u furtay hadii uu doonayo inuu ka tago.